Iimeey-barri Iyo Wax Soosaarka Beeraha iyo Mashaariicaha - Cakaara News
Iimeey-barri Iyo Wax Soosaarka Beeraha iyo Mashaariicaha
Iimeeybari( cakaaranews ) Arbaco 23ka March 2016, Degmada iimay bari oo caan ku ah waxsoosaarka beeraha kana mid ah degmooyinka uu maro wabiga shabeelle islamarkaana ah degmo kamida degmooyinka Gobolka Shabeele ayaa waxaa meel fiican maraya dhismaha mashaariicaha ay fulinayso dagmadu.
Hadaba Kusimaha Gudoomiyaha Degmada Imeey-bari mudane Ibraahim Axmed Saalax oo u waramay shabakada cakaaranews ayaa sheegay in mashaariicihii degmadu ay meel fiican marayaan meesha qaarkamida mashaariicaha ay dhamaystirmeen.
Sidookale wuxuu xusay gudoomiyuhu in ay socdaan labo dhismo oo Biyo xidheeno ah islamarkaana ay ka kala socdaan qabalaha Gudhis iyo qabalaha kuusgeel. Wuxuuna tilmaamay gudoomiyuhu in labadan biyo xidheen ay gabo gabo yihiin.
Ugudanbayna waxuu sheegay in degmadu ay aad ugu faa iidaysato dhanka waxsoosaarka beeraha wakhtikastana kormeero indho indhayn ah ay kusoomaraan beeraha iyo tuulooyinka dajinta.
Dhanka kale, Kusimha madaxa Xafiiska Beeraha iyo Horumarinta khayraadka dabiiciga ah mudane cabdiraxmaan baaruud sahal ayaa isna dhinaciisa kawarbixiyay waxsoosaarka beeraha yo dajinta bulshada xoolodhaqatada ah si ay u noqdaan xoolo dhaqato beeralay isagoo sheegay in bulshada ladajiyay degmada ilaa iyo intii la bilabay dib u dajinta 2003 -2008 T.i ay kabadanyihiin 18,000 oo qoys kuwaasoo kafaa iidaysta dhul ku haboon beerashada islamarkaana ay u socdaan kanaaladii biyaha. Waxuuna tilmaamay masuulku in ay dalagyada ugu faraha badan ee ay beertaan ay yihiin galayda, masagada, sinsinta iyo waliba khudaarta qaybaheeda kaladuwan. Sida basasha, yaanyada, canbaha, muuska iwm.